खिरपुरीवाली बेहुली श्रीमानसंगै पहिलो पटक मिडियामा, बेहुलीले गाडीमा आमालाई सम्झाउँदै गर्दा यस्तो छ श्रीमानको अनुभव! (भिडियो सहित) – PathivaraOnline
Home > जीवनशैली > खिरपुरीवाली बेहुली श्रीमानसंगै पहिलो पटक मिडियामा, बेहुलीले गाडीमा आमालाई सम्झाउँदै गर्दा यस्तो छ श्रीमानको अनुभव! (भिडियो सहित)
admin December 13, 2020 जीवनशैली, भिडियो	0
भर्खरै बैबाहीक बन्धनमा बाँधिएकी शान्तिले आफ्नै श्रीमानको बारेमा निकै नै खुलेर कुरा गरेकी छन् । शान्तिको भनाई अनुसार उनका श्रीमान एक समझदार व्यक्ति हुन् । श्रीमानको तारिफ गर्दै शान्ति भन्छिन्,‘उहाँ नभईदिएको भए सायद म आज यसरी चर्चित पनि हुने थिईन होला । उहाँ धेरै नै समझ्दार व्यक्ति हुनु हुन्छ । म आफुलाई उहाँको श्रीमती हुन पाएकोमा निकै नै भाग्यमानी ठानेकी छु ।’ शान्ति र उनका श्रीमानको भनाईलाई हेर्नलाई तलको भिडियोमा क्लिक गर्नुहोला ।